အသုံးဝင်သောအာဟာရ - ၎င်းသည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်နှင့်၎င်းသည်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကိုနားလည်ပါ။
ထုတ်ကုန်များ	 26 မတ်လ 2018
ဆုံးရှုံးလိုသူများအတွက်ပိုမိုမျှတသောအစားအစာသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသောထုတ်ကုန်များကိုသုံးသောသူများအတွက်ပင်လျှင်သေးငယ်သည့်တိုင်အစားအစာပြောင်းလဲခြင်းသည်အရှိန်မြှင့်ရန်၊ ရလဒ်များကိုမြင့်တင်ရန်နှင့်ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်မျှတတဲ့အစားအစာရှိဖို့ကမကြာခဏခက်ခဲပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုအရှိန်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်မှာဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကူညီရန်အတိအကျဖြစ်သည်။ သူ့အကြောင်းအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဒီ post မှာငါတို့စုဆောင်းပြီးပြီ။ ထွက်ခွာသည်:
မြန်သောကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်ကိုဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ။
မြန်သောကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်ကို ၀ ယ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးသင်ယခုချက်ချင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီပရိုဂရမ်ကိုသူ့ရဲ့ Official Site မှာရောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်ဝင်ကြည့်ရုံပါပဲ https://quitoplan.com.br/pae-2/, ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးမှန်ကန်သောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်ပါ။
အခုချက်ချင်းမင်းရဲ့ ၀ ယ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ၎င်းသို့သင်လမ်းကြောင်းပြောင်းလိမ့်မည် ဆိုက်တရားဝင်မရ။ သင်မ ၀ ယ်ယူမီပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်ကိုအဆုံးအထိဖတ်ပါ။
[junkie-alert style =” red”] ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအစီရင်ခံနေသည့် Diet and Healthy Living ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တရားဝင်ဆိုဒ်သို့ပြန်ညွှန်းရမည် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ [/ junkie-alert]
ဟုတ်တယ်၊ ဒီဆိုက်ကတကယ်လုံခြုံပြီးမင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဒေတာတွေကိုကာကွယ်လိမ့်မယ်၊ မင်းစိတ်အေးအေးနဲ့ ၀ ယ်နိုင်တယ်။
ကုန်ပစ္စည်းဖန်တီးသူသည်အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများအားလုံး၏မူရင်းစျေးကို ၀ ယ်လိုလျှင် ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့်သင်ရရှိမည့်ဆုကြေးငွေတန်ဖိုးကိုသင်စုစုပေါင်း R $ 746,49 ပေးရလိမ့်မည်။ သို့သော်ဖန်တီးသူများကမင်းကို super free bonus ၂ ခုအခမဲ့ပေးပြီး program ၏ပြီးပြည့်စုံသောအရာများအတွက်သာအခကြေးငွေပေးပါလိမ့်မည် BRL 12 ၏ 19,78 ကြိမ် သို့မဟုတ်ငွေသား R $ 197,00
ကုန်ပစ္စည်းအတွက်ငွေပေးချေရန်ဘဏ်ကတ် (သို့) ခရက်ဒစ်ကတ်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကဒ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆိုဒ်သည်အဓိကအမှတ်တံဆိပ်များကိုလက်ခံသည်။
ဒါတွေဟာမင်းရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာနဲ့အဆီလောင်ကျွမ်းစေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရှိန်မြှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေ၊ အစီအစဉ်တွေပါတဲ့အစီအစဉ်တွေပါ။ အစီအစဉ်သည်အဆင်သင့်လုပ်ထားသောမီနူးများနှင့်အရသာနှင့်ကွဲပြားသောချက်ပြုတ်နည်းများမှတဆင့်သင်၏ပန်းတိုင်သို့လမ်းညွှန်လိမ့်မည်။
အကြံပေးချက်များ: bullshit ကိုတိုက်ခိုက်သလိုမခံစားရဘဲအကျိုးရှိတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုလိုက်နာဖို့သင်ယူပါ။
၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်ရုံသာမကသင်မတွေးဖူးသောအံ့သြဖွယ်ရလဒ်များကိုရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလွန်တင်းကျပ်သောအစားအစာမလိုအပ်ဘဲအာဟာရဓာတ်ဖြစ်သောကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်အဓိကသော့ချက်ကိုလုပ်ဆောင်သောကြောင့်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်နှင့်အတူအချိန်အနည်းငယ်ရှိသောလူများပင်အတိုင်းအတာ၌ထင်ဟပ်သောပိုမျှတသောနည်းလမ်းဖြင့်စားနိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရလဒ်များကိုမြင်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့သည်သက်ရှိတစ်ခုစီ၌ကွဲပြားသည်၊ ၎င်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားသည်။
Accelerated Weight Loss အစီအစဉ်ကို ၀ ယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရရှိလိမ့်မည်။
ရက် ၃၀ menu
နေ့စဉ်ဘဝအတွက် 201 ချက်ပြုတ်နည်းများ
၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်သင်မယုံကြည်နိုင်စရာအပိုဆု ၂ ခုကိုရလိမ့်မည်။ သူတို့လား။
အစားထိုးလမ်းညွှန် - အစားအသောက်ကန့်သတ်ချက်ရှိသူများအတွက်
ဟုတ်တယ်! လူတစ် ဦး သည်အချိန်အနည်းငယ်နှင့်စည်းကမ်းအနည်းငယ်ရှိလျှင်ပင်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချလိုသူများအတွက်ဘဝပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကိုယ်အလေးချိန်အမြန်နှုန်းအစီအစဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
မဟုတ်ပါ၊ အစီအစဉ်သည်အတော်လေးကွဲပြားသည်။ ကန့်သတ်ချက်များစွာမပြုလုပ်ဘဲသင့်အားပိုမိုမျှတသောအစားအစာရရှိစေလိမ့်မည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရေးအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သောအစီအစဉ်များကိုကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းအတွက်အထူးပြုအာဟာရပညာရှင်များ၊ ပညာရှင်များမှဖန်တီးသည်။
ပစ္စည်းကို ၀ ယ်သည့်အခါသင်ပေးသောအီးမေးလ်သို့ပို့လိမ့်မည်။ ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ပစ္စည်းကိုပို့ပြီးသည်နှင့်ငွေလွှဲသည်ကိုအတည်ပြုရန် ၇၂ နာရီအထိကြာနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ သင်ပစ္စည်းကိုမြန်မြန်လက်ခံလိုလျှင်စံပြသည် credit card ဖြင့် ၀ ယ်ရန်ဖြစ်ပြီးအတည်ပြုချက်သည်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းထွက်လာလိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်! မည်သူမဆိုအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုပညာရှင်များကတီထွင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျန်းမာရေးမဆုံးရှုံးဘဲကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်လိုအပ်သောအာဟာရအားလုံးကိုပေးသည်။ ဥပမာ၊ lactose သည်းမခံနိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောအစားအစာကန့်သတ်ချက်များရှိသူများကိုဥပမာများ၊ ချက်ပြုတ်နည်းများကိုသူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မည်သို့သင်ပေးကြောင်းအစားထိုးသောလမ်းညွှန်လည်းပါ ၀ င်သည်။
မင်းစိတ်ဝင်စားလား၊ ဒါပေမယ့်မင်းအစီအစဉ်အကြောင်းမေးစရာရှိလား။ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားပါ။ ကူညီရအောင်။
ဆီးချိုရောဂါဖြေရှင်းချက် - သင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝအရည်အသွေး။
ချည်ငင် - နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိအားကစားရုံများတွင်ဖျားခြင်းဖြစ်သည့်ဤလေ့ကျင့်ခန်းမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုရှာဖွေပါ
Fattening Foods: အစားအသောက်ကဘာကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာကိုသိပါ။
Memory Vitamin: သင့်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲလေ့လာပါ။